Guddoomiye Shuute oo u hanjabay Hay’adaha amaanka maamulka Galmudug | KEYDMEDIA ONLINE
Guddoomiye Shuute oo u hanjabay Hay’adaha amaanka maamulka Galmudug
Guddoomiyaha Maxkamada Ciidamada qalabka sida Gaashaanle Sare Xasan Cali ‘Shuute’ ayaa ku amray Hay’adaha amaanka maamulka Galmudug in ay so qabtaan askarii dadki shacabka ahaa ku laysay deegaanka Xirsi lugey oo u dhaxeeya magaalooyinka Guriceel iyo Balanbal oo ku yalla Gobolka Galgaduud.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiyaha Maxkamada Ciidamada qalabka sida Gaashaanle Sare Xasan Cali ‘Shuute’ ayaa ku amray Hay’adaha amaanka maamulka Galmudug in ay so qabtaan askarii dadki shacabka ahaa ku laysay deegaanka Xirsi lugey oo u dhaxeeya magaalooyinka Guriceel iyo Balanbal oo ku yalla Gobolka Galgaduud.
Shuute oo ka hadlayay wax-yaabaha sanadkan u qorsheysan Maxkamada Ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay adeegga garsoorka ciidanka u geyn doonaan maamul goboleedyada u harsan.
Xasan Cali ‘Shuute’ wuxuu carabka ku dhuftay dhibaatada maalmihii danbe ka soo korortay deegaanada Galmudug ee la xariirta aanooyinka qabiilka wuxuuna ku amray Hay’adaha amaanka maamulka Galmudug in ay tallaabo qaadan.
“Hay’adaha amaanka ee Maamulkaas Galmudug, waa in ay soo qabtaan oo ay xiraan oo ay hor keenaan cadaaladda dadkii saraakiisha laayay iyo kuwii shacabka masaakiinta ahaa dilay” ayuu yiri Guddoomiye Shuute.
Shuute ayaa sheegay in ay ku tala-galeen in ay Maxakamad geeyaan deegaanada Galmudug wuxuuna ku goodiyay in maxakamaddaas aysan shaqo la’aaan noqon doonin oo waajib gudasho la’aan lagu qaado doono saraakiishi joogtay goobta haddi aysan soo qaban askarti shacabka leysay, wuxuu yiri. “Maxakamaddaasi shaqo la’aan ma noqon doonto haddii aan la keenin dadkii dhibkaasi geystay, waxaan u leexan doona qodobadii ahaa ninkii shaqadii loo diray kasoo bixi waaya waajib gudasho la’aan ayaa lagu qaadayaa”.